Iithebhu ezili-19 zeReact ukusuka kuYilo lweZinto zibe lula kwaye zinomdla | Izidalwa ezikwi-Intanethi
19 Yenza iithebhu zazo zonke iintlobo zamaxesha kunye nokunye
Sele ikho ngelo xesha sabelana ngothotho lwamaxesha kulawo malungu ewebhu apho sifuna ukurekhoda uthotho lweziganeko. Ngoku kunjalo Iithebhu ezili-19 ezinenjongo enye, nangona kunjalo = React ukuze ufumane eyona ilungileyo ichaza imisitho yexesha okanye imbali yenkampani yakho ngombhalo onxulumene noko.
Kule ingqokelela ye-19 ii-React tabs kukho zombini zithe tye kwaye zime nkqo kwaye bonke bakhululekile ngokupheleleyo. Ke unokuba nazo njengoko uthanda. Uthotho lweethebhu ezigubungela zonke iintlobo zeemfuno zokulandela umgangatho wangoku woyilo lwewebhu kulo nyaka u-2018. Masiyenze ngee-19 React tabs ezingayi kushiya nabani na ongakhathaliyo.
1 Yenza iithebhu ezincinci
3 Yenza iithebhu zewebhu
4 Phendula iiTabhu eziPhendulayo
5 Yenza iithebhu ezifikelelekayo
6 Izinto zeetab
7 Yenza iithebhu zokuhamba
8 I-Tab yokuphendula
9 Phendula uAria Tabpanel
10 Yenza iThabbordion
11 Ngokukhawuleza iiThabhu zeReact
12 Yenza izinto ngokuswayipha
14 Yenza iiTab
15 Iimpawu zeM-M
16 Phendula iiThebhu zoMdabu
17 Phendula ukujonga kweTebhu yesiNtu
18 Yenza i-tabbar yendalo
19 Phendula iiTab
Yenza iithebhu ezincinci
Icandelo lesithuba sokuSebenza kunye iinketho ezisisiseko zokwenza ngokwezifiso isihloko. Ukusuka kwiphepha lomzekelo ungabona inkqubo yokwakheka eyahlukileyo ekhokelela kwithebhu esisiseko yoyilo olwahlukileyo.
Ukusuka kwiikhowudi zebhokisi yebhokisi onakho fikelela kwidemo yale thebhu ye React oko kwahlulwa kukuphinda usetyenziswe kwakhona. Njengoko kunokubonwa kumzekelo, zizithebhu ezisisiseko kunye nolwazi esifuna ukubonelela kwiwebhusayithi yethu. Unalo lonke ulwazi olufanelekileyo kwidemo.
Yenza iithebhu zewebhu
Ngale thebhu ye React sinako khetha ubeko oluthe tyaba okanye enye kwi nkqo. Ukwahlula ngokuba ziimodyuli kunye nokufikeleleka kwezinye iithebhu onokuthi uzibone kwimizekelo yazo ukuze uzisebenzise njengoko zikulungele kwiwebhusayithi yakho.
Phendula iiTabhu eziPhendulayo
Iithebhu eziphendulayo zeReact ezahlulwe ngokuba yeselula. Kwiphepha lomzekelo unokufumana iindlela ezahlukeneyo zokujonga ulwenziwo ngalunye kwezi thebhu zibonelela ngeReact.
Ungaphoswa yeyakho Github.
Yenza iithebhu ezifikelelekayo
Icandelo ifikeleleka kwiithebhu zeReact. Ilula kakhulu kuyo yonke intsingiselo yamacandelo amathathu aboniswe kumzekelo onikiweyo ukuze ufumane umbono wezi thebhu zeReact.
Apha asinalo iphepha ledemo ukubona le thebhu yeReact in situ, kodwa ungaya kwiwebhusayithi kwi-github ukuze ube nayo yonke ikhowudi esandleni sakho. Yipakethe yeReact ebonelela ngento ye iithebhu kuyilo lwezixhobo, ulwimi loyilo isuka kuGoogle ebikunye nathi iminyaka embalwa. Apha ungafikelela kwizixhobo ezipapashiweyo nguGoogle ukusebenzisa uyilo lwezixhobo.
Yenza iithebhu zokuhamba
Ukuphendula ukukhangela iithebhu sisixhobo somgangatho weReact esikuvumela ivumela ukukhangela kwiithebhu kwi-app yakho yewebhu. Ukusuka kwikhonkco elifanayo kwiphepha lomzekelo unokufikelela kwi-Github yayo ukuze ubone ikhowudi eseleyo.
Phendula uAria Tabpanel
Ikuvumela ukuba unxibelelane neethebhu nge Izitshixo zotolo lwebhodi yezitshixo yecandelo le-React eliguqukayo elikuvumela ukuba ulwenziwo olukhulu. Unemizekelo eyahlukeneyo kwiphepha layo ledemo.
Elinye icandelo leReact elinazo zonke iintlobo zokhetho lokwenza ngokwezifiso njengedilesi kwindawo yokugcina izinto. I-Universal kunye ne-semantic ikuvumela ukuba wenze ii-accordion kunye neethebhu zewebhusayithi yakho. Akukho kunqongophala kweenkcukacha kulo lonke ulwazi oluyimfuneko ukumilisela.
Ngokukhawuleza iiThabhu zeReact
Icandelo lesithuba seReact elisebenzisa ubhetyebhetye kunye nomxholo wayo wobukho. Ifezekile ekunikezeleni iithebhu ezifikelelekayo. Lonke ulwazi, kunye nekhonkco kwindawo yokugcina izinto kwiGithub iyafumaneka kwiphepha elinikiweyo.
Yenza izinto ngokuswayipha
Inxalenye ye React yeethebhu ezingenisiweyo kunye neembono ezinokubakho yibone ngomzimba. Igqibelele indawo enikezelwe kwiselfowuni. Unemizekelo yeendlela ezahlukeneyo kwiphepha lomzekelo ukuze ungaphoswa zinkcukacha zeli candelo le-React.
Icandelo le = React tabs ezivela kumzekelo wewebhusayithi onokwahlula okwahlukileyo iinketho ezinikiweyo zokwenza ngokwezifiso. Lonke ulwazi lucwangciswe ngokwaneleyo ukuze ukwazi ukulisebenzisa ngokulula eli candelo.
Iithebhu zalapha ekhaya zokuSabela zombini web njengokuzalwa. Unemizekelo emininzi kwiphepha elinikiweyo ukubona ukuba eli candelo liziphatha njani. Kwikona ephezulu ngasekunene unekhonkco kwindawo yokugcina izinto zeGithub ukuba ufuna ukwazi ngakumbi okanye ukuyithatha kwiwebhusayithi yakho.
Phendula iiThebhu zoMdabu
Njengoko igama layo libonisa, kunjalo ejolise kuYilo lweZinto yokuphunyezwa kweetab. Asinalo iphepha lomzekelo, kodwa sinendawo yokugcina izinto yaseGithub apho ungafumana khona yonke into efunekayo ukudityaniswa kwayo.
Phendula ukujonga kweTebhu yesiNtu
Yenza i-tabbar yendalo
Icandelo le = React tabs) isikhangeli esihle kakhulu kunye nebha yeenkophe.
Phendula indawo yoTywala njengeqonga elizimeleyo elinokuthi isetyenziselwe imivimbo esezantsi kunye neembono zecandelo. Ngale nto sigqiba uthotho lweetab zeReact. Sikushiya ngothotho lweefom kwiCSS ukuze ukwazi ukujonga kwaye ubone ukuba zilungile na kwiwebhusayithi yakho.
Iifoto ezibonakalayo zasemoyeni zeetempile zamaBuddha eBurma